मेकअप लगाएरै सुत्ने बानी छ ? यो पढ्नुहोस्.. – Suchana Hub
मेकअप लगाएरै सुत्ने बानी छ ? यो पढ्नुहोस्..
काठमाण्डौ । रातमा सुत्नु अघि मेकअप राम्रोसँग हटाउनु पर्छ। मेकअप लगाएर सुत्न कहिल्यै पनि सुझाव दिइदैन। अझ फाउन्डेसनले सबैभन्दा बढी हानी गर्छ। किनभने मेकअपले छालामा नराम्रो असर पार्न सक्छ, त्यसैले सुत्ने बेलामा अनुहार राम्रोसँग सफा गरेर सुत्नुपर्छ। मास्कारा नहटाइ सुत्दा यो आँखा भित्र छिर्न सक्छ जसले आँखा चिलाउने हुन्छ। भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ ।
त्यस्तै लिपिस्टिक लगाएर सुत्दा यसले ओठको प्राकृतिक ओस सोस्छ, जसले गर्दा ओठ फुट्ने समस्या सुरु हुन्छ। यदि रातभर अनुहारमा मेकअप छोड्यो भने यसले छालामा निकै नराम्रो असर पार्न सक्छ। मेकअपको बाक्लो लेअरको कारण छालाले चिल्लो र धुलो जम्मा पार्छ। मेकअप लगाएरै सुत्दा छालाले स्वास फेर्न पाउँदैन जसले छाला चाउरी पर्ने समस्या सुरु हुन्छ।
Previous घरमा माउसुली देख्नुभयो ? यस्तो हुनसक्छ संकेत..
Next खाली पेटमा गोलभेडा खाँदा फाइदा हैन हानी गर्छ, जानिराख्नुहोस् :